Singapore (4D/3N)KH - 7003
ရန်ကုန်မှ နံနက်စောစော လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပြီး စင်င်္ကာပူ သို့နေလည်တွင် ရောက်ရှိမည်။ နေလည်စာကို လေယာဉ်ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမယ်။ လေဆိပ်မှ ကြိုဆိုကာ City hall area သို့ ပထမဦးစွာ လှည့်လည်ကြည့်ရှူရပါမည်။ ရောက်ရှိမယ့်နေရာတွေကတော့ Fountain of Wealth နဲ့ နာမည်ကျော်လှတဲ့ Suntec city convention & shopping mall, City Hall, Merlion ပန်းခြံနှင့် မြန်မာတို့ စုဝေးရာ Peninsula Plaza တို့ပါ။ ညစာကို ပင်လယ်စာ ညစာနဲ့ နာမည်ကြီး စင်င်္ကာပူ ဂဏာန်းဟင်းနဲ့ သုံးဆောင်ကြပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး အကြီးဆုံးစိန်ထည် လုပ်ငန်းကို သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ထိုမှ Collagen Product ရောင်းဝယ်ရေးသို့သွားပြီး ဆက်လက်ကာ Universal studio သို့သွားပါမယ်။ နေ့လည်စာအား Universal studio ရှိ Food court တွင် သုံးဆောင်ပြီး ညနေတွင် Sentosa ရှိနာမည်ကျော် “Wings of times” show ကို ကြည့်ရှူပြီးလျှင် Buffet ညစာဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး cable car စီးကာ Mount Faber သို့သွားပါမည်။ ပြီးလျှင် Sentosa ကျွှန်းတစ်လျှောက် နှင့် ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အနားယူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ Madame Tussauds ဖယောင်းပြတိုက်၊ Image of Singapore LIVE museum, Spirit of Singapore boat ride တို့အပြင် chocolate gallery သို့လည့်းသွားပါမည်။ နေ့လည်စာကို စင်္ကာပူ ကြက်ဆီထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။ စားပြီးလျှင် Garden by the bay သို့သွားလည်ပတ်ကာ ပြီးလျှင် ညစာ သုံးဆောင်ပါမည်။
Day :4Singapre Departure (Breakfast & Lunch)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဟိုတယ်မှ check-out လုပ်ကာ လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် နေ့လည်စာကို သုံးဆောင်ကြရပါမည်။ နေ့လည်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
၁။ K & H မှ မြန်မာ Tour Leader နှင့် English စကားပြော Guide
၂။ ခရီးစဉ်တွင် ပို့ဆောင်မည့် နေရာများ၏ ဝင်ကြေးများ
၃။ ခရီးစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် စားသောက်စရိတ်နှင့် ပို့ဆောင်စရိတ်များ
၄။ Hotel စရိတ် ၃ ည စာ (၁ ခန်း - ၂ ယောက်)
ခရီးစဉ်တွင် မပါဝင်သော အခြားစရိတ်မျာ3းStars Hotel in Singapore Prices
1. Adult Fare: USD 765 $
2. Child With Extra: USD 680 $
3. Child Sharing Bed: USD 600 $